Ma Afrikaan Baa Wax Taray Soomaaliya Mise Innagaa Wax Tarnay Iyaga ! – Somali Top News
May 23, 2018 May 23, 2018 Somali Top News	0 Comments
(Wax ka ogow sida Dowladda_Somaliya u taageertay Dalal Afrika ah!!)
Wixii ka horeeyay burburka #Qaranka_Somalia gaar ahaan Todobaatamayadii iyo Sideetameeyadii dowladda Soomaaliya waxay kaalin muhiim ah ka cayaari jirtay taageerada la siiyo dalalka Africa ee xiligaas ku jiray gacanta Gumeystaha reer Galbeedka.
Dalalka Soomaaliya taageertay waxaa ka mid ah Mosambik, Guinea-Bissau, South Africa, Namibia, Angola, South Africa iyo Zimbabwe, kuwaasoo qaarkood ay u dirtay ciidamo halka qaarkood ay siisay xerooyin lagu tababaro ciidamada dalalkaasi.
Dowladda Soomaaliya dalalka Afrikaanka ah oo ay ciidamo difaaca ama taageera u dirtay waxaa ka mid ah Musambik iyo Ganua Basi. Ciidamada Soomaaliya ee tagay dalalkaasi ayaa ka qayb galay dagaalka ay dalalkaasi la galeen ciidamadii Portaqiiska ee gumeysanayay labadaasi dal.
Dad xog ogaal ah ayaa ii xaqiijiyay ciidamadii Soomaaliyeed ee tagay Dalka Mosambik, Guinea-Bissau in qaarkood lagu dilay dagaalka ka dhanka ahaa Gumeystaha Portaqiiska ee labadaasi dal ee ayagu halgan ugu jiray sidii ay isaga qaadi lahaayeen heeryadii Gumeystaha.
Sidoo kale, sanadii 1975 Dowladii Soomaaliya ayaa ciidamo gaaraya 500 u dirtay si ay difaacaan Dowladdii taagta darneyd ee Zambia oo weeraro kala kulmeysay ciidamada cadaanka ee Gumeysanayay wagaas dalka Zimbabwi oo wagaas loo yaqiinay Rhodesia.
Dalalka dowladda Soomaaliya xoriyadda ay gaarsiisay ayaa ka mid ah Angola, Mosambik iyo Guinea-Bissau. Madaxwyene Maxamed Siyaad Bare ayaa ahaa Madaxweynaha kaliye ee African ah oo ka qayb galay Xafladdii loo sameeyay maalinta la saaraya calanka dalka Mosambik sanadii 1975.
Sanadkii 1971, markii Idi Amin uu Afgambiyay madaxweynihii Uganda Milton Abote, dowladaha Somalia, Tanzania iyo Suudaan ayaa diiday inay aqoonsadaan idi Amin, waxayna diyaariyeen kumanaan ciidan isku dhaf si ay ugu diraan dalka #Uganda inkastoo markii dambe xiisaddaasi lagu dhameeyay wadahadal, lana baajiyay ciidankaasi.
Dowladda Soomaaliya ayaa Todobaatameeyadii tababaro ku siin jirtay xerada #Hiilweyne Ciidamo iyo Duuliyaal ka socday dalalka South Africa, Nambimbia, iyo Burndi.
Jabhadaha ay taageertay laguna tababari jiray Soomaalia waxa ka mid ah ANC(SOUTH AFRICA), SWAPO(NAMIBIA), ZANU-PF(Rhodesia-Zimbabwe), Frelimo (Mozambique), EPLF (ERITREA), MPLA(ANGOLA)
Hadaba, intaas oo taageero ah ah iyo kuwa kale ayay Soomaaliya u sameysay dalalka Afrikada Madow oo Soomaalida qaar ka warheynin. Isweydiintuna waxay tahay; Dalalka Afrika ee Abaalka aan u galnan mu gudeen oo mana garab istaageen markaan burburnay? Jawaabta waa #MAYA ayadoon meel fog laga raadin bal qaarkood waxay noo geysteen dhibaatooyin uur-ku-taalo leh.
Dalalka Soomaaliya lagu cadibay oo xariga iyo dilalka loogu geystay waxaa ka mid ah Kenya, South Afric, Angola iyo Tanzania. Waxaa la xaqiijiyay ilaa iyo hada boqolaal qof oo Soomaali ah o gaaray dalalkaasi nolol iyo Geeri aan lagu heynin oo qaarkood xabsiyada lagu hilmaamay.
Sidoo kale, Dowladaha Afrika ee Jaarka nala ah ayaa ka faaideystay burburkeena waxayna hubeeyeen Jabhado beeleedyo sagaashameeyadii haatana waxa hub siiyaan Maamul goboleedyada qaar ee Beelaha ku dhisan si Soomaalida la isugu jabiyo.
Waxaa intaas oo dhan ka daran in dowladaha Kenya iyo Ethiopia marnaba raali ka ahayn in Soomaaliya cagaheeda isku taagto. Mana heyno dal Afrikaan ah oo kaalmo la taaban Karin ina siiyay xiliyada Abaarta iskaba daa Deeq waxbarasho oo la taaban karo inaan ka helno Africa.
Waxaan la hilmaami Karin kumnaanka qof ee Soomaalida ah oo ciidamada Ethiopia ay ku dileen gudaha Soomaaliya gaar ahaan Caasimadda #Muqdisho iyo Degmada Luuq iyo waliba Boqolaalka Ciidamada Kenya ay ku dileen Gobolada Bay iyo Gedo ee Soomaaliya. Arimahaas oo dhan waa cadowtinimo ay noo qabaan dalalka Africa.
Waxyaabaha la yaabka leh waxaa weeye Dalalkii ay taageeri jirtay Soomaaliya maanta waxay naga jecel yihiin Ethiopia iyo Kenya, noomana arkaan inaan nahay dad #Afrikaan, waxa ugu weyn oo ay nagu colaadinayaan waa inaan nahay Muslim%.
Sidaan horey ugu soo sheegay Qormadii tan ka horeysay. taageerada ay na siiyeen dowladaha Carabta ee ku saleysan walaalnimada, ma jiraan dowlado Afrikaan ah oo Sidaas noo taageeray xilligaan dowladda ahayn iyo markaan burburnay ka dib? Mase ogtahay Ciidanka Amisom ee jooga Soomaaliya in danahooda ay u joogaan oo mushaar badan ay ku qaataan dowladaha soo diray ciidankaas?
Mase Ogtahay Ciidanka Ethiopia iyo Kenya ee Jooga Soomaaliya inay u joogaan Soomaaliya Amnigooda qowmiga ah islamarkaasina aysan u joogin danaha qaranka Soomaalia?
Aniga Koley waxaan aaminsahay in Carabta wax badan na tareen, islamarkaasina ay yihiin dad aan walaalo nahay, waana qirayaa in Dowladaha qaar Nidaamyada ka jira dalalkooda dartood ay naga gaabiyeen, balse marnaba ma aysan noo dhibaateen inta Afrika ay noo geysatay oo Annaga qaarkood gaarsiinay xornimada ay heystaan maanta. Hagardaamada Siyaasiga ah ee Kenya iyo Ethiopia ay noo geysteen ama ay haatan noo geysanayaan waa kuwa Soomaaliya aysan ka soo kaban doonin nus qarni.
← UN Chief Shares Grave Figures On Civilians In Armed Conflicts
Inside Kenya Army’s War On Al Shabaab In Somalia →